मनमोहक स्पेनिश शहरहरू जुन इन्स्टाग्राम | यात्रा समाचार
१० आकर्षक स्प्यानिश शहरहरू जुन इन्स्टाग्रामलाई जित्छ
के तपाइँलाई केहि दिनको छुट्टी चाहिन्छ तर धेरै टाढा जान चाहनुहुन्न? ठीक छ, तपाईं भाग्यमा हुनुहुन्छ किनकि, धेरै नजिकै तपाईं त्यहाँ स्पेनिश शहरहरूको श्रृंखला हुनुहुन्छ जुन बीचमा प्रेमीहरू छन् इन्स्टाग्राम। त्यसोभए पक्कै पनि, तिनीहरूले तपाइँलाई पनि त्यस्तै गर्नेछन्। शान्त गन्तव्यहरू जहाँ तपाईं काम र अन्य समस्याहरूबाट विच्छेदन गर्न सक्नुहुनेछ, जबकि उनीहरूले हामीलाई उनीहरूको जादू र अद्वितीय कुनाहरूले घेरेका छन्।
यस्तो सुन्दरता जुन कहिलेकाँही हामीसँग एउटा पाइला हुन्छ, तर हामी यसलाई महसुस गर्दैनौं। तसर्थ, आज हामी ती सबैको नाम लिइरहेका छौं। स्पेनिश शहरहरू इतिहास, विरासत र कुनाहरूको एक धेरै संग तपाईं भुल्नुहुनेछैन। एक आकर्षक ठाउँहरूमा आकर्षक छुट्टी। के हामी हाम्रो झोला पैक गर्दैछौं?
1 Llanes इन्स्टाग्राम मा विजेता शहर हो
2 Sóller उल्लेख मा चाँदी पदक लिन्छ
3 Mogán, तेर्सो स्थानमा एक राम्रो समुद्र तट गन्तव्य
4 सारिया, अर्को सबैभन्दा प्रिय स्पेनिश शहरहरू
5 एस्टोर्गा, लिनको शहर पाँचौं स्थानमा
6 पिलाफ्रुगेल छैठौं स्थान गिरोनाको शहरको लागि
7 सेन्टोआ क्रममा सातौं स्थानमा छ
8 Cjdiz मा Vejer de la Frontera
9 Baeza, एक विश्व विरासत साइट
10 कम्बाडोस, दशौं र अन्तिम स्थानमा
Llanes इन्स्टाग्राम मा विजेता शहर हो
हामी सहरबाटै शुरू गर्छौं जुन इन्स्टाग्राममा सबैभन्दा उल्लेख गरिएको छ। के उनले स्वर्ण पदकको साथ गरेका छन्, र कुनै आश्चर्य छैन। यो उल्लेख गरिएको हुनुपर्दछ कि यससँग २१,,214.842२ भन्दा बढी ह्यासट्यागहरू छन् सामाजिक नेटवर्कले भने, छुट्टी भाँडा खोज ईन्जिनले गरेको रैंकिंग अनुसार, होलिडू। ठीक छ, Llanes अस्टुरियस मा स्थित छ, क्यान्टाब्रियन समुद्री द्वारा स्नान र पिकोस डी यूरोपाको धेरै नजिक। यसको सुन्दर समुद्र तट र यसको चारैतिर पहाडहरू र उपत्यकाहरूको भित्तासँग पोर्ट क्षेत्र फरक छ। अवश्य हामी यसको कलात्मक सम्पदा बिर्सन सक्दैनौं जहाँ हामी काउन्ट ला वेगा डेल सेला, पेलेसको ड्युक्स अफ एस्ट्राडा, स्यान साल्भाडोरको चर्च वा टोरेरेन डे लॉस पोसाडा र अन्य धेरैलाई हाइलाइट गर्दछौं।
Sóller उल्लेख मा चाँदी पदक लिन्छ
इन्स्टाग्राममा कुल २०,, .209.667 उल्लेख सल्लरलाई सबैभन्दा आकर्षक स्पेनी शहर बनाउने कुरा हो। मल्लोर्काको उत्तर पश्चिममा अवस्थित यो सिट्रस बालीहरूको लागि धेरै प्रसिद्ध भयो। आज, यसको मुटु प्लाजा डे ला कन्स्टिट्युसिनमा रहेको छ, तपाईं अनौंठो कुनामा र उत्तम पेट्रोनोमीको मजा लिन सक्नुहुन्छ। ट्राम जुन पोर्ट क्षेत्रसँग जोड्दछ धेरै प्रसिद्ध छ, भ्रमण गर्न बिर्सनु भएन सन्त बार्टोमेउ गिर्जाघर.
Mogán, तेर्सो स्थानमा एक राम्रो समुद्र तट गन्तव्य
यो रँकि inमा तेस्रो स्थान ओगटेको छ, १२२, 122.970 .० ह्यासट्यागसहित, स्पेनी शहरहरूको इन्स्टाग्राममा अधिक उल्लेख गरिएको छ। यो Gran Canaria मा अवस्थित छ त्यसैले हामी एक राम्रो समुद्र तट क्षेत्र को बारे मा कुरा गर्दैछौं। तर केवल त्यो मात्र होइन, तर हामी पोर्ट क्षेत्र, चट्टानहरू र प्रोमेनेडहरू भेट्टाउनेछौं, विशाल सौन्दर्यको चट्टानहरूमा। केही सबै भन्दा राम्रो चिनिएका समुद्र तटहरू हुन् ला भेर्गा वा पटलाभाका बीच, पोर्टो रिको बिच भूल नगरी।
सारिया, अर्को सबैभन्दा प्रिय स्पेनिश शहरहरू
हामी उत्तरतिर फर्कन्छौं र यस अवस्थामा हामी लुगोमै बस्छौं। यद्यपि अझ विशेष गरी सरियामा। एउटा शहर जुन १०103.117,१13.000। भन्दा बढि इन्स्टाग्राममा उल्लेख गर्दछ। १ XNUMX,००० भन्दा बढी बासिन्दाहरूको साथ यसले १ cultural औं शताब्दीदेखि टोरे डी ला फोर्टालिजा र ला मग्दालेनाको मठको रूपमा सांस्कृतिक सम्पदाको राम्रो खुराक प्रदान गर्दछ। अवश्य पनि यो सबै ठाउँमा तिनीहरू अझै फेला पार्न सकिन्छ २० भन्दा बढी रोमान्सिक गिर्जाघरहरू.
एस्टोर्गा, लिनको शहर पाँचौं स्थानमा
,,, ०89.068। उल्लेख सहित, एस्टोर्गा पाँचौं स्थानमा देखा पर्दछ। तर यो यो हो कि यो सब भन्दा सुन्दर र प्रशंसा गरिएको स्पेनिश शहर हो। थप रूपमा, हामी फेरि १ शताब्दी ई.पू. जानु पर्छ जब यो एक सैनिक शिविरको रूपमा जन्म भयो। आज हामी यसको प्लाजा मेयरमार्फत हिंड्न सक्छौं, आफैलाई चकित पारौं गुआडा प्यालेस वा यसको क्याथेड्रल, मध्ययुगीन पर्खाल बिर्सनु हुँदैन र पक्कै पनि, यसको चकलेट संग्रहालय। एक मिठो स्टप जुन सँधै यसको लागि लायक हुन्छ।
पिलाफ्रुगेल छैठौं स्थान गिरोनाको शहरको लागि
यो एक छ तटीय र माछा मार्ने गाउँ। त्यसोभए, यो पहिले नै थाहा पाएर, हामीलाई थाहा छ कि यसले यस फिल्मको सनसेटहरूसहित यसको साना सेता घरहरू, यसको लोभा र भूमध्य जंगलको बीचमा छ। यी सबैले विश्रामको केही दिनको मजा लिनको लागि शान्तिलाई छोडिदियो। यो 85.947 XNUMX,। .XNUMX उल्लेख गरेकोमा आश्चर्यजनक कुरा छैन।
सेन्टोआ क्रममा सातौं स्थानमा छ
क्यान्ट्याब्रियाको पूर्वी भागमा हामी सान्तोआ पाउँछौं। हो, यो इन्स्टाग्राम सामाजिक नेटवर्कमा स्पेनी शहरहरूको सबैभन्दा प्रिय शहर हो। योसँग, 84.403०XNUMX उल्लेख छ। एकचोटि तपाईले यस भूमिमा जानु भयो भने, कल गर्नु जस्तो केही छैन घोडा लाइटहाउस मार्ग। निस्सन्देह, यसलाई पहुँच गर्न, यसको बारे 685 steps100 चरण तल जान आवश्यक हुन्छ र १०० बढी यदि तपाईं समुद्रमा चिसो चाहानुहुन्छ भने। सन्तोआ बे र यसको बन्दरगाह अन्य क्षेत्रहरू पनि विचार गर्न सकिन्छ।
Cjdiz मा Vejer de la Frontera
हामी आठौंमा पुगेका थियौं, Instagram१,१ on१ इन्स्टाग्राममा उल्लेख गरिएको छ र त्यसले हामीलाई अर्को सबैभन्दा सुन्दर र मनमोहक स्पेनी शहरहरूमा लग्छ। यो २०० भन्दा बढी उचाइमा अवस्थित छ र बार्बेट नदीको किनार। यसको ऐतिहासिक केन्द्र पर्खाल लगाएको छ र यसको महल र थुप्रै चर्चहरू अझै देख्न सकिन्छ। यसका साँघुरो सडकहरूमा घुम्दै, तपाईं यसको घरहरूको सुन्दरता र त्यसमा फूलहरूको आनन्द लिनुहुनेछ।
Baeza, एक विश्व विरासत साइट
Úबेदा सँगै यस्तै घोषणा गरियो, र यो आश्चर्यजनक पनि छैन। किनकि मँ काँसा युगदेखि बसोबास गर्ने भूमिमा उदाएको छु। यस कारणका लागि, यसको सम्पदा वास्तवमै विभिन्न शैलियों र संस्कृतिहरूको मिश्रणमा धनी छ। बाएजा प्रवेश गर्नका लागि फिर्ताको लागि छ मध्ययुगीन युग relive। ढुone्गा सडक, वर्ग, यसको क्याथेड्रल र झरना पनि यी सबैको राम्रो उदाहरण हुन्।
कम्बाडोस, दशौं र अन्तिम स्थानमा
अन्तिम तर कम से कम हामीले कम्बाडोस फेला पार्‍यौं। यो पोन्तेवेदरामा अवस्थित छ र स्पेनिश शहरहरू मध्ये एक हो जसको इन्स्टाग्राममा, 66.079,०XNUMX men उल्लेख छ। यो वाइन को यूरोपीय शहर को रूप मा चुनिएको छ। त्यसैले यी देशहरूमा भ्रमण सधैं यस्तो विशिष्ट उत्पादनको स्वाद लिने विचार गर्दछ। तर थप रूपमा, भव्य घरहरू, स्यान फ्रान्सिस्को कन्भेन्ट वा सान्ता मारिया डोजोको भग्नावशेष, यो स्थानको अन्य मुख्य बुँदाहरू हुन्। तपाईंले यी शहरहरूमध्ये कतिवटा भ्रमण गर्नुभयो?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » पर्यटन गन्तव्यहरू » १० आकर्षक स्प्यानिश शहरहरू जुन इन्स्टाग्रामलाई जित्छ